पोखरा रंगशालाको मैदानका लागि ६३ लाखको दुबो ! | Hamro Khelkud
पोखरा रंगशालाको मैदानका लागि ६३ लाखको दुबो !
शनिबार, कार्तिक ९, २०७६
पोखरा (हाम्रो खेलकुद)– अर्को महिना आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि पोखरा फुटबल मैदानमा ओछ्याउनका लागि दुबो भारतबाट ल्याइएको छ । भारतबाट ल्याइएको दुबोको मुल्य ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको बताइएको छ । शुक्रबार ३० हजार स्क्वार फिट दुबो आइपुगेको बताइएको छ ।
झन्डै ८२ हजार स्क्वार फिट दुबो मैदानमा रोप्नु पर्ने निर्माणधिन रंगशालाका प्रोजेक्ट मेनेजर दीपक बरालले जानकारी दिएका छन् । नपुग दुबो नाँचजाच पछि पछि आयत गरिने उनले जानकारी दिए । मैदानमा ८५ हजार स्क्वायर फिट दुबो आवश्य रहे पनि भारत बाट आयात गर्दा बिग्रने दुबो समेतको सट्टा भर्ना निर्यात कम्पनीले दिने जानकारी बरालले दिए ।
‘हामीले करिब करिब मैदान भित्रको दुबो रोप्ने काम सकेका छौं’ उनले भने–‘ यो काम निकै महत्वको र चुनौतीपूर्ण थियो । मैदान भित्र रोपिएको दुबोको लागि भारत बाटनै निर्यात गर्ने कम्पनीका २ जना प्राविधिकहरु खटिएका छन् ।उनीहरुले१५ दिन भित्र मैदान तयार भइसक्ने जानकारी दिएको बताइएको छ ।
निर्माण कम्पनीले अब केही दिनमा ट्रयाक एण्ड फिल्डको काम सुरू गर्ने बरालले जानकारी दिएका छन । ट्रयाक एण्ड फिल्डको सबै काम सक्न ३/४ दिन लाग्ने उनले बताए । भारतको विशाखापट््नम वन्दरगाहमा ग्राण्ड स्टाण्डका सामाग्री सोमबार सम्म आइपुग्ने उनले जानकारी दिए ।
हाल पोखरा रंगशालामा ८–१० हजार सिट क्षमताका ए, बि र सि गरि तिन वटा ग्यालेरी अबको तिन सातामा तयार भइसक्ने र त्यहाँ १२ वटा शौचालयहरु निर्माणको काम समेत सकिने बरालले बताए । पोखरा महा नगरपालिकाका प्रमुख एवम् १३ औं साग पोखरा सहजिकरण समितिका सदस्य मानबहादुर जि.सीले शुक्रबार दुबो निरक्षणका लागि रंगशाला पुगेका थिए ।
प्रमुख जि.सीले भने –‘काम सक्न निर्माण कम्पनीले निकै उत्साह देखाएको छ तर जति छिटो काम सम्पन्न हुनु पर्ने थियो त्यो हुन नसकेकोमा मेरो चिन्ता हो ।’ १३ औं साग मंसिर १५ देखि २४ गते सम्म काठमाडौं र पोखरामा तय छ । पोखरा रंगशालामा महिला फुटबल आयोजना हुने बताइएको छ ।
तस्बिर सौजन्य – सुदर्शन रञ्जित